Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ kiln kwesịrị ekwesị dịka ọnọdụ obodo si dị?
Kedu otu esi ahọrọ kiln kwesịrị ekwesị dịka ọnọdụ obodo si dị?
Ka ọ dị ugbu a, isi akuku maka brik ụrọ na taịl ndị e nwere na China bụ ọwara ọkụ na ọkụ na-agbanwe agbanwe (nke na-agagharị Ọwara). Ọwara kiln has dị iche iche na ha nwere ike nkewa dabere na dị iche iche Njirimara: ọ nwere ike nkewa dị ka nnukwu cross ngalaba ọwara kilns, ọkara cross ngalaba ọwara kilns na obere cross ngalaba ọwara kilns (dị ka 2.5m, 3.3m, 3.6m, 4.6m, 4.8m, 6.9m, 9.2m, 10.3m ) site nha nke ọwara kiln si cross ngalaba; ọ nwere ike nkewa dị ka njiko n'uko ọwara ọta, micro aak n'uko ọwara n'ekwú ọkụ na ewepụghị uko ụlọ ọwara dabere na ọdịdị nke ọwara n'ekwú ọkụ n'uko; ọ nwere ike nkewa dị ka ogologo ọwara n'ekwú ọkụ na obere ọwara n'ekwú ọkụ dabere na ikike nke kilns; na ya nwekwara ike nkewa dị ka 'ozugbo tojupụtara ma na-ere ọkụ ọwara n'ekwú ọkụ' na 'okpukpu abuo ma kpo oku oku'. Nhọrọ nke ụdị kiln na-ekpebi itinye ego nke ụlọ ọrụ brik.
Nhọrọ nke ụdị kiln nwere ezi uche sitere na akụkụ abụọ:
Otu akụkụ bụ ebe ntinye ego na teknụzụ. E nwere ọtụtụ ụdị njirimara nke ụdị kiln dị ugbu a iji zute ndị ahịa dị iche iche'dị iche chọrọ. Ọmụmaatụ, site akara larịị nke n'ekwú ọkụ mmepụta akara, e nwere ọkara akpaka kiln na ọkara ntuziaka n'ekwú ọkụ na nkịtị akara n'ekwú ọkụ. Mgbe kiln na-agba ọsọ, ndụ ọrụ nke oku dị iche iche site na itinye ihe dị iche iche na-eguzogide okpomọkụ: ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eji ihe ọkụ ọkụ na-eguzogide ihe ọkụ ọkụ maka ọkụ ahụ, ebe ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike iji ọkwa ọkara ma ọ bụ ọbụna ihe ndị nkịtị na-eguzogide okpomọkụ. Na nhọpụta nke ihe nkwado nke igwe ọkụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ 'otu maka ojiji na otu maka njikere' na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ otu igwe. Na ọdịdị nke oku, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ icho mma nke kilns na efere mkpuchi mkpuchi eji achọ mma, ebe ụlọ ọrụ ụfọdụ anaghị eme. Na usoro nke ígwè Ọdịdị, ụfọdụụlọ ọrụ jiri pụrụ iche ekara ihe si ịme ngosi uwe ngwaahịa nke ofu nkọwapụta, mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ nanị iji wuru ihe owuwu. E nwekwara ọtụtụ ndị iche na okwu nke n'ekwú ọkụ's multi-function: the kilns in south and in in north, mgbanwe nke ihu igwe, iji ike na ikuku, na wdg.
Akụkụ ọzọ bụ ịchọta site na ngwa nke akụrụngwa. Ugbu a enwere ọtụtụ ụdị akụrụngwa maka brik (ụrọ) brik, dị ka shale, ada uyi, coal gangue, ụrọ, silt osimiri, ugwu slag ala, ịnweta ọdụ, mkpofu ahihia na na. Mgbe ahụ chọta kilns si sintering okpomọkụ, nke na-ekpebi nke nke ihe onwunwe ukeme. The ihe onwunwe ego nke elu sintering okpomọkụ n'ekwú ọkụ dị nnọọ iche na nke ala sintering okpomọkụ n'ekwú ọkụ. The sintering okpomọkụ na-abịa site nanhọrọ mmanụ ọkụ. Mgbe ị na-ahọrọ mmanụ ọkụ, ọ dị mkpa iji nyochaa obosara nke eriri ọkụ dị warara ma ọ bụ n'obosara, wee chọpụta ogo ya.
Mgbe ị na-ahọrọ ụdị kiln ahụ, anyị ga-atụle mmekọrịta dị n'etiti akụkụ ndị dị n'elu. Ezi uche nke ụdị kiln dị oke mkpa maka ndị na-emepụta ụlọ ọrụ brik.